भारतले ३ लाख भन्दा बढी नागरिकहरुलाई आफ्नो देश ल्याउँदैछ, नेपाल सरकारले कहिले ल्याउने ? – Ktm Dainik
भारतले ३ लाख भन्दा बढी नागरिकहरुलाई आफ्नो देश ल्याउँदैछ, नेपाल सरकारले कहिले ल्याउने ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
भारतले ३ लाख भन्दा बढी नागरिकहरुलाई आफ्नो देश ल्याउँदैछ, नेपाल सरकारले कहिले ल्याउने ?
दिपबहादुर बडुवाल (दीपक)
बुधवार, वैशाख २४ २०७७
भोली बिहीबार बैशाख २५ गते भारतबाट अमेरिका, फिलिपिन्स, सिंगापुर, बंगलादेश, युएई, युके, साउदी अरेबिया, कतार, सिंगापुर, फिलिप्पीन्स, ओमान, बहरेन र कुवेतका लागि उडानहरू जाँदै छन् आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता ल्याउन ।
कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना हजारौं नागरिकहरूलाई भारतले बैसाख २५ गते बिहीबार देखि विश्वको सबैभन्दा ठूलो निकासी अभियान शुरू गरेर हवाई र समुद्री मार्ग मार्फत फिर्ता ल्याउने भएको छ । तीन लाख भन्दा बढी भारतीयहरूले उडान घर (flight home) को लागि भारत सरकार संग अनुरोध गरेका थिए ।
पश्चिमी एशिया र माल्दिभ्समा अडिएका भारतीयहरूका लागि नौसैनिक युद्धपोतहरू पनि तयार भै सकेका छन । खाडी युद्ध पछिको यो पहिलो सबैभन्दा ठूलो निकास अभ्यास (Evacuation Exercise) हुनेछ । खाडी युद्धको बेलामा पनि भारतले आफ्नो राष्ट्रिय एयरलाइन्स एयर इंडियाका थुप्रै बिमानहरु बाट आफ्ना १ लाख ७० हजार नागरिकहरुलाई हवाई मार्ग मार्फत फिर्ता ल्याएको थियो । त्यतिबेलाको त्यो घटना पनि संसारकै सबै भन्दा ठूलो निकास (Evacuation) थियो ।
भारतीय नागरिकहरु झैं हाम्रा देशका नागरिकहरु पनि धेरै देशमा अलपत्र परेका छन । धेरैको रोजगारी खोसी सकिएको छ । उनिहरु पनि आफ्नो देशमा फर्किन चाहन्छन । कैयौं चोटी सरकार संग अनुरोध पनि गरी सकेका छन ।
सरकारमा बसेका सम्बन्धित व्यक्तिहरू (officials) ले एक चोटी सोच्नु पर्ने हुन्छ कि अलपत्र परेका ऊनि नागरिकहरुको ठाउँमा यदि तपाई भएको भए, तपाईलाई कस्तो महसूस हुन्थ्यो होला ?
कोभिड-१९ फैलिन न दिनका लागि अहिले सम्म हाम्रो नेपाल सरकारले चालेका कदमहरु प्रशंसनीय छन । त्यसको हामीले स्वागत गर्नै पर्छ । हाम्रो देशमा अहिले सम्म ९९ जनामा संक्रमण देखिएता पनि यस रोग बाट मृत्यु भने भएको छैन । यो एउटा सुखद कुरा हो । तर भारतीय नागरिकहरु झैं हाम्रा देशका नागरिकहरु पनि धेरै देशमा अलपत्र परेका छन । धेरैको रोजगारी खोसी सकिएको छ । उनिहरु पनि आफ्नो देशमा फर्किन चाहन्छन । कैयौं चोटी सरकार संग अनुरोध पनि गरी सकेका छन ।
त्यसैले, देशका सम्पूर्ण नागरिकहरुको तर्फ बाट मेरो सरकार संग विनम्र अनुरोध छ कि हाम्रा नागरिकहरुका लागि पनि स्वदेश भित्र्याउने पहल गर्नु पर्यो ।
(लेखक कर्णाली प्रदेश, दैलेख जिल्ला आठबीस नगरपालिका वडा नं. ८ तिलेपाटा, स्थायी बसोबास भई हाल बीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा व्यवसायी तथा समाजसेवीको रुपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । )
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, असोज २८ २०७७ १५:०१:३५
आयल निगमको प्रस्ताव: जोरबिजोर देखि इन्धनमा कोटा प्रणाली